‘संघर्ष अझ चुलिएको छ’- मुस्कान खातुन (अन्तरवार्ता) – ThePressNepal
‘संघर्ष अझ चुलिएको छ’- मुस्कान खातुन (अन्तरवार्ता)
अमेरिकाले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला आईडब्ल्यूओसी पुरस्कार प्रदान गरेको छ । खातुन जो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै एक किशोरले पर्सा वीरगञ्जमा २०७६ साल भदौमा एसिड आक्रमण परिन । यस पिडा संगै गुजरिदैं महिला हक अधिकारका सुरक्षा सशक्तिकरणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी मुस्कानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एसिड आक्रमणमा पर्ने महिलालाई सरकारको तर्फबाट न्याय सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै उचित कानुन कार्यन्वयनमा समेत भुमिका खेलिन ।
‘मुस्कानले एक दुःखद घटनालाई नेपालमा परिवर्तन ल्याउने एक अवसरमा रूपान्तरण गरिन् । धम्की र सामाजिक दबाबको सामना गर्दै मुस्कानले तेजाब हमलाविरुद्ध कडा कानुन र सजायको लागि लबी गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी। ओलीसँग भेट गरिन् जसले तेजाब हमलासम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्न आह्वान गरे र अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने तथा रसायनको बिक्रीलाई नियमन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरे । यो परिवर्तन ल्याउनमा मुस्कानको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण थियो ।’ भन्दै अमेरिकी राजदुतावासले खातुनको प्रशंसा गरेकव छ ।
प्रायजसो ठूलो व्यक्तिगत जोखिम र त्यागमा शान्ति, न्याय, मानव अधिकार, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको वकालत गर्ने तथा असाधारण साहस र नेतृत्व प्रदर्शन गरेका विश्वभरका महिलाहरुलाई अमेरिकाले आईडब्ल्यूओसी पुरस्कारले सम्मान गर्दै आएको छ । तीनै साहशिक महिला खातुनसंग द प्रेस नेपालका लागि गरिएको कुराकानी अवको क्रममा
तपाइँलाई अमेरिकाले विश्वभरबाट छनौट गर्ने बर्षको उत्कृस्ट महिलाको रुपमा पुरस्कृत गर्यो कस्तो महशुस हुदो रहेछ ?
मलाई एकदम नै खुशी लागेको छ । मेरो जिबनको एकदमै ठुलो सरप्राइज (खुशी) हो यो । एती ठुलो सम्मान पाउदा धेरै खुशी छु । बिहान उठ्ने वितिकै जव नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुतावास बाट फोन आयो तेतिवेला नै खुशीको सिमा नै रहेन । यसरी सम्मान पाउन चाही तिन करोड दाजु,भाई ,दिदि ,बहिनिहरुको माया र सपोर्ट छ । त्यस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली ज्यू र महान्याधिबक्ता अग्निखरेल ज्यूले दिनु भएको माया र सपोर्ट कै कारण यो संमान पाएको हुँ जस्तो लाग्छ सवैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
तपाइँलाई एसिड आक्रमण भयो तेस्पछि तपाईको त्यो अठोट साहसलाई सबैले मनन गर्दै आइरहेको छन त्यो समय देखि आहिलेको समयसम्म आइपुग्दाका उतार चडावहरु कस्ता रहे ?
२०७६ साल भदौं २० गते जव ममाथी पढ्न जाने क्रममा एसिड आक्रमण भयो । विरगञ्जमा उपचार संभव नभएपछि मलाई किर्तिपुर अस्पतालमा भर्ना गरियो । उक्त समयको पिडा र जलनको छटपटी अहिले अ कल्पना सम्म गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । त्यतिमात्र हैन तेजावको पिडा एका तिर र अर्को तर्फ हाम्रो फितलो कानुन झन घाउमा नुन खोर्सानी छर्ने काम गर्यो । त्यसैले मैले आफु पिडा खपे पनि आगामी दिनमा म जस्ता अन्य दिदि बहिनिले यस प्रकारको पिडा खप्न नपरोस भनेर अस्पतालको वेडबाटै आवाज उठाउन थाले । त्यहीपिडाका विच मैलै प्रधामन्त्री ज्यूलाई चिठी लेखे ।
प्रधामन्त्रीबाट कुनै रिप्लाई नआएपछि हस्पिटल को बेडबाट बाहिर निस्केर धेरै ठाउमा आवाज उठाए । सो क्रममा मिडियाका दाजु,दिदि, भाइ बहिनिहरुले धेरै सपोर्ट गर्नु भयो । सोही क्रममा एकदिन कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘इट्स माई सो’ कार्यक्रममा गए र त्यहा मेरो मनमा लागेको सबै कुराहरु राख्ने मौका पाए । उक्त कार्यक्रम माहान्याधिबक्ता अग्नि खरेलको श्रीमती हेरिरहनु भएको रहेछ । र उहाँले तिमीलाई प्रधानमन्त्री संग भेटाइ दिन्छु भन्नु भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटने अवसर मिल्यो । उक्त भेटमा पनि खुशीको सिमाना थिएन ।
प्रधानमन्त्रीसंग भेट्न जाने वेलामा नै लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले चाहनु भयो भने यस सम्वन्धी कानुन ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर । त्यसो त यो मेरो व्यक्तिगत समस्या पनि थिएन म जस्तै धेरे एसिड पिडितको समस्या लिएर गएकी थिए । प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा हाम्रो पिडा जलनको बारेमा सबै बताएको थिए । जसरी मलाइ एसिड आक्रमण भएको थियो । कसरी उपचार भयो ।
प्रधानमन्त्रीसंगको भेटकै क्रममा दैनिक गुजाराको विषय देखि जागिर नपाउनेसम्म र एसिड पिडितहरु अस्पताल जादाँ अन्य विरामी अस्पताल नआउने भन्दै अस्पताल सञ्चालकले गर्ने सवै दुरव्यवहारका विषयमा कुरा राखे । यस विषयमा राज्यले प्रमुखताका साथ ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मेरो आवाज थियो ।
त्यसपछि त कानुन पनि बन्यो हैन त ?
प्रधानमन्त्री ज्यूले १५ दिन भित्रमा नै कानुन बनाउने जानकारी दिनु भयो । नभन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेकै समयमा कानुन बन्यो त्यो मेरा लागि मात्र हैन हामी सवैका लागि अर्को खुशीको विषय थियो । अव कानुनले नै पिडकलाई २० बर्ष को जेल सजाय उल्लेख गरेको छ । जसले एसिड आक्रमण गर्छ तेस्को सम्पति सबै रोक्का हुन्छ र रास्ट्रबाट नै असिड पिडितहरुको इलाज खर्च पनि सरकार बाट नै हुन्छ । सरकारको तर्फबाट नै जागिर पाउछौ । त्यस्तै जो असिड पिडित पढ्न चाहन्छन उनीहरलाई राज्जबाट नै पढन पाउछन भन्दा खुशीको सिमा नै रहेन । यसरी कानुन बनेर खुशी भएपनि त्यो खुशी धेरै दिन टिक्न भने सकेन केही दिनमा ने आरती दिदिमाथी एसीड आक्रमण भयो । म जती खशी थिए त्यो पिडामा परिणत भयो ।
तपाईहरुले भने जस्तै कानुन पनि बन्यो । एसिड आक्रमण गर्नेलाई ज्यान मुद्दा जत्तिकै सजाय पनि हुने भयो तर आक्रामण त रोकिएन नी हैन ? तपाईले नै भन्नु भयो कानुन बनाए लगत्तै अर्को एसिड आक्रमण भयो भनेर ।
हो तपाइले भनेको एक दम सहि हो । मेरो विचारमा जसले एसिड आक्रमण गर्छ त्यसलाई पनि थाहा छैन कि एसिड आक्रमण गरेपछि मलाई पनि के सजाय हुन्छ भनेर त्यसैले जनचेतना जगाउन सारै नै जरुरी छ । अनी हामी महिलालाई चाहिँ self-defense को लागि तालिमहरु पनि लिनुपर्छ । त्यसैले म अहिले पनि तालिम लिइ राखेको छु तेक्वान्दो तालिम लिइ राखेको छु । किनकि पहिले नै यस्तो तालिम लिएको भए सायद अहिले म एसिड आक्रमण मा पर्ने थिएन होला ।
फेरी सम्मान तर्फ नै फर्कौं । त्यो पीडालाई छिचोलेर यहाँसम्म आएको मुस्कान अब फेरी सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले विश्वकै उत्कृष्ट महिला को सूचीमा दरिलो पाइला चालेको महिला भनेर तपाईंलाई सम्मान गरेको छ । सम्मानपछि मुस्कान लाई हामीले कसरी बुझ्ने ?
तपाईहरुले जसरी मलाई हस्पिटलको बेडबाट हेर्नु भएको थियो,माया गर्नु भएको थियो अहिले मलाई जिन्दगीमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । आफ्नो लागिमात्र हैन धेरै महिलामाथि हुने हिंसा अत्याचार अपराधको पनि एउटा आवाज बन्न चाहन्छु । आफुले सक्दो उहाँहरूलाई न्याय पनि दिलाउन चाहन्छु म जति आफ्नो आवाज उठाउनु सक्छु त्यति नै म उहाँको लागि आवाज उठाउने छु र न्याय पनि दिलाउन चाहन्छु । र म सायद त्यो पनि गर्न सक्छु हजुरहरूको सपोर्ट र माया को कारण । अहिले धेरै कुराहरु गर्ने इच्छा छ ति हरेक इच्छा चाहना हरुमा हजुरहरुले support गर्नुभयो भने म अगाडी बढ्न सक्छु । अव अझ संघर्ष सुरु भएको जस्तो लाग्छ त्यसैगरी बुज्दा राम्रो होला ।
Tags: एसिड आक्रमण एसिड कानुन एसिड पिडित एसिड पिडित मुस्कान खातुन मुस्कान खातुन
Previous महिलाहरुको चालक मोह
Next एक बालक दिनमा ४ सय पटक युवक १७ पटक मुस्कुराउँछन र प्राउड व्यक्ती मुस्कुराउनै जान्दैन
अखाद्य रंग नखाएर पनि के चाडपर्व मनाउन सकिँदैन र ?
चौतर्फी मारमा अभिभावक(अन्तर्वार्ता)
कस्तो खोप हो जोनशोन एण्ड जोनशोन ?